Okpu okpu agha nke eji agba igwe? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Okpu agha igwe ịgba ọsọ - azịza nkịtị
Okpu agha igwe ịgba ọsọ - azịza nkịtị
Okpu okpu agha nke eji agba igwe?
Ekoi. A na-ahụkarị Ekoiokpu aghaemeputa na Tour de France nke afọ a, na-akwado ndị na-erughị otu anọ na-anọchite anya akara French. AR14 bụ nke ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya họọrọ, yana atụmatụ ikuku ya na obere oghere abụọ na-aga n'ihu maka iku ume.4 ụbọchị gara aga
Okpu agha na akpụkpọ ụkwụ, mpempe abụọ nke m na-eche banyere ihe kwesịrị ekwesị na nkasi obi mgbe m na-agba ịnyịnya ígwè, ma nwee obi ụtọ na e nwere ọtụtụ akụrụngwa dina n'akụkụ ebe a na Santos Tour Down Under, yabụ enwere m ike ịnweta ndị ahụ ruru unyi na ha ma lee anya kpọmkwem ihe dị ọhụrụ na-atụ anya na ọ bara uru. Ka emechara, Elia Viviani bụ nri m ubu na ọ maa nwere ihe. (Ifufe na-agba ọsọ) (mgbịrịgba igwe) (egwu elektrọn nwayọ) Naanị lelee okpu agha UAE Team, na nke a bụ MET Trenta.
Ma ọ bụ carbon 3K n'ihi na enwere ntakịrị anụ carbon ebe a na azụ okpu agha ahụ. Ọ na-aga n'ihu n'ihu. Achọpụtaghị m ya.
Ọ dị ịtụnanya etu ihe si agbanwe mgbe ị na-ele akụkụ dị iche iche nke ìhè. Ọ na-amasị m ịkpụ okpu agha a mana ka anyị leba anya n'eziokwu ahụ. Vents 19 na ọ bụ naanị ya dị gram 235, ọ naghị arọ ka m chere na ọ ga-eme ihe n'eziokwu.
Echere m mgbe niile na ọ dị ntakịrị okpu agha. Isi gburugburu na nhazi ahụ na-amasị m, atụmatụ ndị dị na mpụga. Nakwa obere ikuku ahụ ebe a.
Naanị ị toụ obere ikuku mgbe ọ na-aga siri ike. Nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri na azụ. Ngwa mara mma.
Yabụ Elia Viviani, nwa nwoke hụrụ n'anya ịhazi ngwa ya, ma ugbu a, ọ bụrụ na ị merie agbụrụ ọ mere wee nweta aha, ị bụ yabụ nke ahụ bụ okpu Ekoi Corsa Evo. O nwere vents 23, gram 235, ugbu a Ekoi bụ akara anyị anaghị ahụ ọtụtụ. O doro anya na ọ bụghị na UK.
Mana ha nwere nhọrọ na weebụsaịtị ha iji hazie gia na obi ha. Na m mara mma n'aka na e nwere a mara mma dị mkpirikpi ụzọ oge kwa. Enwere m mmasị na eziokwu ahụ na ọ nwere nkọwa ọla edo na azụ nke onwe ya.
Usoro mgbochi. Lovehụ ihe n'anya dị nnọọ chere ruo mgbe ị hụrụ akpụkpọ ụkwụ ya. Are bụ chic.
Ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughi oke, naanị m kwesịrị ịkọwa na enwere ike magnet na eriri nke okpu agha a. Naanị pịa ma gaa. (Slow electronic music) N'afọ gara aga na Tour Down Under, Elia Viviani kpọọrọ m ya DMT KR1 Knit akpụkpọ ụkwụ na Italian Champs Colorway masịrị.
Ọfọn afọ a lelee ihe ọ nwere na ụkwụ ya. O nwere otu akpụkpọ ụkwụ ahụ, mana na ọkaibe n'okporo ụzọ European. Ugbu a akpụkpọ ụkwụ ndị a ga-adị mma maka Tour Down Under n'ihi na ọ mara ezigbo mma, ka anyị chee ya ihu.
ngwakọ ụmụ nwanyị ndị nwere ngwakọ na-enyocha
Akpụkpọ ụkwụ na-eku ume ume n'ihi owuwu ọkụ. Na, mma, m bụ a nnukwu ofufe nke ha. Gini kwa banyere ha? N'afọ gara aga na Tour Down Under, ị ga-echeta na ndị folks na Specialized mere obere akpụkpọ ụkwụ na okpu agha a hapụrụ ka ha wee mee ememme Tour Down Under na agba ndị ga-eso ya, nke ọma n'afọ a lelee acha anụnụ anụnụ na odo a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agba ka ọ bụrụ ngwa ndị ahụ.
Know ma ihe, aga m etinye okpu m na mbụ. Ma kwue banyere ya nke fọdụrụ n'ihi na okpu na-amasị m. Enwere m ike ịkọwa akụkọ n'azụ ya.
Ọfọn anyị nwere ụzọ anya n'akụkụ n'akụkụ ebe a na nke a bụ ime ememe budgie nke Australia. M na-enwebu cockatiel mana nke ahụ enweghị ihe jikọrọ ya na ya. Ọ bụ naanị ihe kpatara ha ji wepụta ngwaahịa a, Agba Agba, bụ iji nweta ego maka WIRES, ego anụ ọhịa Australia.
Na Specialized ga - enye onyinye $ 100,000 na ego iji nyere aka chekwaa budgie nke Australia nke sitere na otutu oku ndi a mere na Australia. Echere m na ọ bụ oké ogbugbu, a oké ogbugbu, na otu nke ngwaahịa na bụ nnọọ mma kwa. Achọrọ m nnọọ ka ha hara nha m.
Okpu agha ahụ nwere ike dabara. (ngwa elektrọniki nwayọ) Iji gaa na ngwa budgie-themed sitere na Pụrụ iche bụ igwe kwụpụrụ iche nke Allez Spring aluminium. Ma ọ bụrụ na i cheghachi azụ ọnwa iri na abụọ, ị ga-echeta na Peter Sagan na Jay McCarthy si na ndị ọrụ Bora Hansgrohe jiri igwe kwụ otu ebe na aluminium na Crite rium tupu ezigbo Santos Tour Down Under n'onwe ya.
Afọ a Eric Basker na m n'aka na Jay McCarthy nwere otu n'ime ndị ahụ kicks. Ha nwekwara igwe kwụ otu ebe a n'ụdị mma mara mma, nke nwere oke mbipụta. Ọzọ, iji gbalịa ị nweta ego maka budgie Australia a.
Ya mere, Pụrụ iche Allez Sprint, dị ka m kwuru na mbụ. Anyị nwere teknụzụ Delucio Smartweld, nke ị nwere ike ịhụ n'oche ọkọlọtọ, ọ bụrụ na ịchọrọ, na igwe kwụ otu ebe. Mana ọ na-adọrọ mmasị na tube ala na oche oche.
N'ihi na welds e nwere, ọ bụrụ na ịchọrọ, kpaliri ntakịrị site n'ọnọdụ ndị ọkọlọtọ. Ihe kpatara nke a bụ n’ezie ịnwa imeziwanye ọnọdụ ịkwọ ụgbọala. Echere m ime ka igwe kwụ otu ebe mara mma ma sie ike.
Ọfọn, m chere na igwe kwụ otu ebe n'onwe ya dị ezigbo mma. Yougaghị eji ọkwa dị n'ihu na njem emegharị ala n'okpuru. Maka, nke ọma, ọ bụ nnukwu mgbasa ozi maka akara a.
Na-akpali mmasị, a na-onwem na nke a bike na tubeless taya. Amaghị m ma ha agbụrụ ha na njegharị ma ọ bụ. Buru n'uche na e nwere ndị na-agba tube na-agagharị n'ụwa na afọ gara aga.
Afọ a ọ ga-abụ afọ ha ga-abịa n’ezie? Ma ọ bụghị ya, anyị nwere otu Shimano Dura-Ace DI2. Ma n'ezie na ọ bụ diski breeki version, n'ihi na ndị niile na-agba ịnyịnya na-eji Pụrụ iche anyịnya igwe na World Tour bụ na diski brek, M na-amasị agba. N'ezie, anyị ga-ebupụ ya n'èzí n'ihi na ị hụghị ya n'ime mma ya niile n'ime.
Ọ bụ ụdị kpochara aluminom, mana ọ nwere anodized imecha site na Instagram n'abalị ụnyaahụ mgbe m na-ehi ụra. Ma m nọ na - - Jetlag.- Ee, jetlag, ehighị ụra nke ọma, ikekwe ntakịrị ntakịrị ha abụọ, mee ihe na agbanyeghị.
Gwa anyị ihe ị mere.- alaghachitere m na Bont na Speedplay n'afọ a, ana m ekele gị na m nwere ike ịgba ọsọ Speedplay ka ihe bụ n'ezie ihe m na-achọ n'ezie. Enwere m ọdịiche dị n'ụkwụ nke 3 mm.
Ana m akwọ onye na-asacha 3mm n'ụkwụ aka ekpe m na kposara anọ. Akpọrọ m nke abụọ n'ime ha, tinye ya n'elu, wee pịazie ya. O nwere uzo ole na ole.
N'ihi ya, m na-ehicha ya. N'ihi ya, ọ bụ ụdị dị ọcha na ewepụghị. Ma mgbe ahụ, ee, nke ahụ rụkwara ọrụ.
Yabụ ozugbo m laghachiri UK, m ga-enweta nke aka ekpe m n'ihi na ihe nkwụnye ahụ bụ 3mm nke ọma. Aga m agbapụ akpụkpọ ụkwụ aka nri m ka o wee jikọta ya na kposara anọ, enwere m ike ịwụnye nkwụnye ọkọlọtọ na ụkwụ aka ekpe m. Ọ ka nwere oghere ụkwụ m chọrọ, mana m nọ nso 3mm ma ọ bụ 3mm dị ala karịa nke mbụ.
Echere m na nke ahụ na-ewetara m mkpokọta nchịkọta 9mm dị iche site na pedal m jiri afọ gara aga. Nke ahụ dị ezigbo mkpa. - Ee, nke ahụ dị ọtụtụ.
Nke a ọ pụtara na ị ga - eji ihe dị ka sentimita wedata ghaa gị site na teknụzụ? Ihe atụ iji tinker ihe? - Ee ọ masịrị m. Enwere m mmasị na teknụzụ nke ịgba ịnyịnya ígwè. The aero n'akụkụ.
mmega ahụ na atherosclerosis
Know mara, oge ikpe ụdị dị ka, oge m ikpe ọpụrụiche na-aga aka na aka ya. Yabụ, ee, ọ dịkwa mma. Know mara, Israel Start-Up Nation bụ ezigbo ndị otu ọhụụ.
Ndị nkwado ahụ ghọtakwara na ọ bụrụ na enwere ike ịme ihe ka mma, ndị otu a na-emeghe ihe. Ọ bụ ezie na echere m na n’oge gara aga anyị nwere oke oke site n’ụdị ndị nkwado anyị nwere. Ma ọ nwere ike ịbụ oke.
Ma, ị maara, ọ dị ka otu ọ bụla nwere akụrụngwa dị mma karịa nke ọzọ. You lere ndị otu ọzọ anya wee sị, 'Oh, anyị na-enyefe obere watts ebe a' ma e jiri ya tụnyere ndị na-eme mgbanwe ahụ ma ọ bụ mgbanwe njikwa ahụ. 'Ma ọ bụ ya.
Ma mgbe ahụ ha lere anyị anya ma chee, 'Oh, ha nwere ngwa ngwa akpụkpọ anụ.' Ma ọ bụ otú ahụ. Ọ dị ka swings na roundabouts ebe ị na-anwale ma mee ọtụtụ ihe ị nwere, kwa.
Ma nwee olile anya na ndi otu a ga-emeghe obi ma di njikere isonyere ochicho gi. Ihe mba Israel bidoro dị mma maka, Ọ dị ka - Ekoi Legend helmet bụ nke ndị otu na AG2R La Mondiale ji eme ihe na Romain Bardet zuru oke. Mgbe ụfọdụ ozi gbasara okpu agha ahụ.
O nwere vents iri abụọ na asatọ, ọ dị naanị gram 235, ma echere m na ọ nwere ụdị ezigbo echiche. Chetara m okpu agha ochie nke si na mgbe ahụ. M na-amasị ya.
Ọ bụ ezie na echeghị m na ha kwesịrị ịkpọghachite ya. Ma ha dị ezigbo nso na nke ahụ. Ọrụ dị mma. (egwu elektrọn dị nwayọ) N'ezie, enwere m ọchichọ, m hụrụ ka ị gbanyere akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ n'afọ gara aga.
N'afọ a ị nwere akpụkpọ ụkwụ nke m chọrọ itinye ụkwụ m, mana echere m na ị dị ntakịrị karịa m. Ee, ọ bụ naanị gị na ndị a ma ọ bụ gịnị? Echere m, ha mara ezigbo mma. - Nelson nwere di na nwunye.
Ee, m na-ekwu, ha gosipụtara ụbọchị ole na ole gara aga. Yabụ ee, ha dị ka ndị ọhụụ ọhụrụ maka ịgba ọsọ akpụkpọ ụkwụ. Ha dịkwa ukwuu. - Dakọtara agba nke jersey kwa, ị bụghị? Nke ahụ ọ bụ ihe dị mkpa? maka gị ma ọ bụ? - M na-ekwu, ọ bụghị n’ezie.
Enweghị m obi ụtọ na ị maara otú m si ese (ọchị) Ma ee, ha dị mma. M mara mma picky banyere akpụkpọ ụkwụ. Ọ dị ka akpụkpọ ụkwụ 2011.
Anọ m na-eyi ndị a ihe dị ka afọ anọ. N'ihi na achọghị m ịgbanwe. Ya mere, mgbe ndị ahụ pụtara ihe na-erughị otu izu tupu agba ọsọ ahụ, echere m, 'Ee, enweghị ohere.' Na mgbe ahụ, m tinyere ha, echere m n'ime onwe m: '(mkpọtụ) ha dị ezigbo mma' (ọchị) Ya mere ee, enwere m ha - Aka nri, ọ bụrụ na ịmee, laghachi na ụdị Shimano, dị ngwa ị nwere ha ma ị ghọtara, 'Oh, ha na-ada ntakịrị.' You nwara ịchọta ụfọdụ ebe ma ọ bụ? 'em.' - Ee, ee, ọ masịrị m, azụrụ m niile 43.5s enwere ike ịzụta na eBay.
Ma mgbe ahụ, dị ka, niile dị ka ochie nchekwa racks. Ma mgbe ahụ, 'ruo n'ikpeazụ, ọ nweghị naanị 43.5 dị n'ebe ọ bụla.
Echere m, 'Oh, oge eruola.' Ọ bụ oge. A ka nwere otu ụzọ m ga-achọ idobe ma ọ bụrụ na m ga-aga b ack to you mara.
Enwerem ha. Ha nọ ebe ahụ. - Ozi ọma ahụ bụ na achọpụtara m 43.5 gị na m.
N'ihi ya, mma na-ha n'okpuru eyiri. Ma ọ bụghị ya, m ga-eso gị hapụ ha ka ị pụọ.- Ee, ọ dị mma.- Lee anyị, ụfọdụ teknụzụ na-atọ ụtọ ma a bịa n'ihe gbasara okpu agha na akpụkpọ ụkwụ.
Enwere m mmasị ịhụ ihe ndị a n'ihi na ị naghị enweta ọtụtụ ihe site n'ime nwere ike ịhụ ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe. Mee ka m mara na ngalaba nke dị n'okpuru ebe ihe kachasị amasị gị nọ ebe ahụ. Echefula ileta ụlọ ahịa GCN na shop.globalcyclingnetwork.com na gịnị ma ị budata ngwa GCN, dị na Storelọ Ahịa Ngwa yana yana Playlọ Ahịa Google.
Ma ugbu a maka nnukwu ederede abụọ ọzọ, kedụ maka ị pịa ebe a n'okpuru wee pịa ebe a n'okpuru.
Kedu ihe mkpuchi igwe ịgba ịnyịnya kachasị mma?
Okpu okpu kacha mmaịzụta taa
Ntụrụndụ AgụbaOkpu agha.
Mojito okpu aghaIgwe okpu igwe.
Ọpụrụiche S-Work Prevail.Kacha mmaọnụ ọnụokpu igwemaka ndi osiso.
Vanquish gbagọrọ agbagọ.Kacha mmaelu-ọgwụgwụokpu aghana integrated shades.
Bell Zephyr MIPS. Ala commuterokpu aghanwere ọtụtụ ụlọ maka imeghari.
igwe kwụ otu ebe na-enweghị ụkwụ
Site na okpu agha a ị nwere ike ịgwa mmadụ atọ ndị ọzọ okwu maka ihe dịka 800 m na mbara ala. O dakọtara na ngwa ndị ọzọ Bluetooth na ngwa ọfụma maka nnukwu ngalaba intercom na njikwa ọrụ. Iji mee ka ihe ka mma, ọ na-eme ka nkà na ụzụ Advanced Noise Control na-ebelata ifufe na mkpọtụ ụda ka ị nwee ike ikwurịta okwu mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè.
Uru ya bu: - O dakọtara na ngwa bluetooth; - Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ama ngwa ọdịnala; - Ọ dị mfe iji; - Ọ na-enye ogologo oge ọrụ; na - Ọ na-onwem na HD audio ọkà okwu na a okwu. Agbanyeghị, ọghọm ndị a bụ: - Ọ nweghị ọkụ ọkụ ma ọ bụ ọkụ azụ ọkụ; na - O nweghi ihe nkpu anwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ okpu igwe mara mma na arụmọrụ Bluetooth, Sera X1 bụ ezigbo nhọrọ maka gị.
Yabụ ị na-ejikọ oge niile n'oge njem igwegharị gị. Chọtabeghị okpu igwe na-emezu ihe ị chọrọ? Nọgide na-ele anya, anyị nwere ọtụtụ maka gị. Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị na-eleta ọwa anyị, denye aha na ọwa wee pịa akara mgbịrịgba iji nweta ọkwa gbasara isiokwu anyị ndị ọzọ.
Tinyere okpu agha nke Acromrometer emere okpu agha, njirimara a na - enyere aka iulateomi ọkụ igwe breeki. Ọ na - achọpụta mgbe ị na - akwụsị nwayọ ọsịsọ ma ọ bụ kwụsị na mberede. N'okwu a, ọkụ na azụ ga-acha uhie uhie.
Batrị LUMOS Kickstart nwere ike ịdịru aka elekere isii. Ọ dị mma maka oge 30 ruo 45 nke igwe kwụ otu ebe kwa ụbọchị. Mgbe batrị tọgbọ chakoo, cheta ịkwụnye okpu agha na njikwa.
Ọ bụ ezie na o kwesịghị iji dochie ọkụ ihu igwe gị na azụ ya, okpu a nwere ike ime ka ịnyịnya gị ghara ịnwe nsogbu site na iwepu mkpa ọ dị inye akara aka. Uru ya bu: - O nwere nhazi di nma; - Ọ na-abịa na-enwu gbaa Ikanam ọkụ; na - Ndị blinkers ya bara uru. Kaosiladị, ọghọm ndị a bụ: - Ọ dị arọ; - Ọ bụ naanị dị na otu size; na - ọ dị oke ọnụ.
Uber merie obodo
Ọ bụrụ na ị na-achọ okpu igwe eji igwe igwe eji arụ ọrụ na teknụzụ ọhụụ, gbalịa Safe-Tec Tyr 3. Okpu agha a mara mma na-enye gị ohere ijikọ ma nwee nchebe na njem. Tupu anyị ekpughe nọmba 1, gbaa mbọ hụ na ịkọwapụtakwara nkọwa dị n’okpuru maka azụmahịa ndị ọhụrụ na nke ọ bụla n’ime ihe ndị a.
Nye na-eme okpu agha igwe kwụ otu ebe kachasị mma?
NaZọ Kacha Mmana UgwuOkpu aghaNwere ike ịzụta ugbu a
Kachasị mmaAHENTRAT. Giro Aether. keleastamel.com.
NANI OGO IRI ABUO. Ntinye Schwinn. amazon.com.
Kachasị mmaMaka obere isi. Giro Scamp. keleastamel.com.
Kachasị mmaURU Ọ BARAHzọ okpu. Echelon II. keleastamel.com.
Kacha nchebe. Fox Dropframe Pro.
Febbọchị 1 2021
Echi Trainiacs anyị ga-ekpori ndụ ọzọ taa anyị bịara ebe a na-anwale ngwaọrụ dị iche iche iji nye gị echiche nke ebe ejiri ego gị rụọ ọrụ kacha mma Ihe anyị ga-eme ebe a taa ga-anwale ụfọdụ okpu agha ugbu a Na tiori, okpu agha bụ ihe kachasị ọsọ, ụdị okpu ụzọ ụzọ agha kwesịrị ịbụ nke abụọ kachasị ọsọ na okpu agha whee kwesịrị ịbụ nke dị nwayọ nwayọ, mana ọ bụrụ na ị jụọ ụlọ ọrụ okpu agha, ha agaghị agwa gị ego ole bụ n'ezie jiri nwayọ karịa nke ọzọ, yabụ anyị ga-anwa ịchọpụta ihe anyị nwere dị ka ego na anyị nwere dome nke na-aga n'okporo ụzọ n'okporo ụzọ yana ihe ọtụtụ ndị na-eme okpu agha na okpu agha kwuru na nke a ị bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikuku dị ka anyị na-achọpụta Ọ bụrụ na ihe ndị a niile bụ eziokwu etu esi bụrụ eziokwu na ha nwere olile anya na ị nwere ike ịchọpụta ebe ejiri ego gị rụọ ọrụ d Elmetsi ga-eme 150 watts na okpu agha a wee jiri 210 watts na okpu agha a, nke a na-enye ị ihe ngosi nke ebe-akwụ ụgwọ na b enefits gafee, m ga-eme nke ahụ na okpu agha nke ọ bụla maka nkeji atọ na ọkara iji tụgharịa, laghachi azụ nkeji atọ na ọkara, yabụ na okporo ụzọ a anyị nọ nwere usoro dị mma nke ukwuu, yabụ anyị nwere obere ikuku ikuku obere isi ifufe obere ọdụ ifufe ọtụtụ ihe ga-eme ogologo oge obere watt elu watt niile dị iche iche okpu agha ka anyị gotrainiacs anyị nwere data niile gbakọtara iji tụnyere okpu agha nke akọwapụtara na okpu agha aero kwesiri ka odi ka nke ozo, ihe dika ihe ndi ozo dika okpu agha, ma oburu na ichoro ihe kachasi nma nke anyi gwara anyi bu okpu agha nke ozo ma nwezie okpu uzo nke ana ekwu na odi nma nke oma bụ naanị forro mgbasa ozi ịkwọ ụgbọala agaghị adị ngwa ngwa, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ngwa ngwa ị nwere ike itinye ihe mkpuchi mmiri ozuzo na ya nke ga-adị ngwa ngwa mana ọbụlagodi na m jụọ ndị na-elekọta laser ma ọ bụ ụlọ ọrụ okpu agha ihe ha gwara m, anyị maara nke ọma na anyị na-eme ya? Anaghị m enye data a n'ezie otu ọsọ ọsọ karịa nke a ma ọ bụ karịa karịa na m na-eche ma ọ bụrụ na anyị na-azụ ihe ndị a n'ihi na a na-agwa anyị na otu ọsịsọ karịa nke ọzọ. Enwere m ụfọdụ data ma ọ bụ ụdị ihe ijuanya nke ọ bụ? bụ nke kachasị ọsọ, yabụ data niile sitere na garmin1030 gbakwunyere na-egosi na anyị nwere ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti okpu agha niile, mana ọ bụchaghị agbanwe agbanwe n'etiti ọkwa mbọ, yabụ ka anyị bido site na nnwale 150 watt na n'ule a okpu agha bọọlụ, nke bụ nke a bụ, nke a bụ okpu agha Aeroroad nwalechara nke kachasị ọsọ ugbu a nwalere na 32.1 km / h karịa nkeji asaa ọ gara maka 3.76 kilomita nke kachasị ọsọ, ebe a anyị nwere ọdịiche dị na Faste st na ọ bụ pasent efu okporo ụzọ okpu agha na mkpuchi, nke abụọ kasị bụ 31.7 kilomita kwa awa.
Nke ahụ dị ka akara akara nke 19 ish20 nke a na-ebugharị maka 3.71 kilomita na 1.25 nwayọ nwayọ, okpu agha ahụ bụ n'ezie ọ dị nwayọ na 31.3 kilomita kwa elekere wee chụọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3.66 kilomita abụọ na ọkara ji nwayọ nwayọ karịa ụzọ ụgbọ elu na ụzọ okpu igwe. bụ nke kachasị nwayọ: 31.2 kilomita kwa elekere 2.8 pasent nwayọ tupu anyị abanye na nwayọ ọ ga - eme ka ị gaa n'ọsọ anyị gbadara 210 watts, na nke a, ọ kachasị bụ n'ezie okpu agha na mkpuchi na 36.1 kilomita kwa awa 4.23 kilomita efu ji nwayọ karịa nke kachasị, mana n'oge a okpu okpu bụ ihe kachasị mkpa maka ọsọ ọsọ nke 36.1 kilomita kwa elekere mana naanị 10 mita dị mkpụmkpụ na 4.22, nke a dị ka ntụgharị nke ikekwe ọdịiche nke abụọ mgbe ị pịa bọtịnụ gbara gburugburu wee bọọlụ bụrụ nke atọ kachasị ọsọ na 35.9 kilos mita kwa elekere 4.2 naanị nwayọ nwayọ, mana ọkara ọkara nwayọ nwayọ na okpu igwe ịgba ọsọ bụ nke kachasị nwayọ na 35.1 km / h Mkpa nwere ike kwuo na ị na-ele anya na nke a ma na-eje ije dị otú ahụ? Echere m, kedu usoro m, n'ihi na na 150 watts okpu agha aero bụ nke kachasị ọsọ, mana mgbe ahụ ọ bụ nke atọ kachasị ọsọ na 210 watts ma dịka okpu agha n'okporo ụzọ nke mkpuchi ya kachasị ọsọ na n'okpuru na 210 watts ọ bụla ọnọdụ ndị ahụ bụ n'ezie ibuo okpu agha ndị kasị eziokwu na ihe bụ? Ihe data a na agwa anyi ma ghara ighota na nke a bu otu onye, ​​obughi otutu ndi mmadu otutu mgbe n’onu uzo ikuku n’ime gburugburu ebe ndia nile, ma nka n’enye anyi ihe na-egosi na anyi emeghi lezie Anya itinye data n'akụkụ mgbe m nọ n'ọdụ ụgbọ mmiri pụrụ iche maka zwift tri academy n'afọ gara aga, agwara m ndị nchọpụta ka ha mara nke ọma ihe ha na-ahụ n'etiti okpu agha n'ihi na ha anwalela okpu igwe dị iche iche na ndị egwuregwu niile. na anyị achọtaghị ụdị ọnọdụ ọ bụla akọwapụtara nke ụfọdụ ndị.
Okpu igwe eji enyere mmadu aka bu uzo kachasi dika ndi mmadu choro, okpu agha nke ugbo ala bu ihe kachasi ngwa ngwa dika ichoro ka ndi ozo buru. Gagharị isi gị n’okporo ụzọ ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ bụ ihe kachasị ọsọ, ihe na-agwa m bụ na enweghị azịza ọ bụla na-agwa gị, hey, ị ga-azụta okpu agha. Otú ọ dị, nke ahụ na-agwa m na enwere ihe ngosi na mkpokọta igwe kwụ otu ebe n'onwe ya dị nwayọ nwayọ n'oge niile. Ee, m ga-ekwenye na nke a bụ ihe ịchọrọ n'ezie maka ịnya okporo ụzọ naanị, mana ọbụlagodi na ị na-eji ya maka ịnya ụzọ In nke a, m ga - asị na ị zụrụ okpu agha Aeroroad n'ihi na ịnwere ike iji ya maka ịnyagharị n'okporo ụzọ, ịnwere ike iji ya nwalee ya ugbu a ọ ga - abụrịrị gị ọsọ ọsọ maka gị na triathlon, mana maka imirikiti ndị mmadụ n'ezie naanị nwere onye chọrọ ịchekwa ntakịrị ego ma dị ka o kwere mee na-enweghị imebi akụ Nke a nwere ike bụrụ ihe kachasị mma maka ego gị Enwere ihe kpatara iji nweta okpu agha aerodynamic super, ma eleghị anya m ga-ekwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ okomoko ị ga-anwale ụfọdụ okpu agha sitere na mpaghara gị? Lọ ahịa igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ na ịchọrọ ịtụ ọtụtụ ihe na ntanetị wee zighachi ndị niile na-abụghị ọsọ ọsọ, gbalịa ihe ga-abara gị uru n'ihi na o doghị anya na okpu agha ọ bụla dị n'ụwa ga-adị ngwa karịa nke ọ bụla okpu ọzọ Inwa, ugbu a, tupu anyị emechie, ka anyị kwuo, site na nke kachasị ọsọ gaa nwayọ, ego ole ka ị ga-atụ anya ida n'iji ya, sịnụ, naanị otu okpu igwe eji aga n'okporo ụzọ ka ị wee nwee ike ikpebi na mgbakwunye Enwere ego iji zụta a elu-ọgwụgwụ okpu agha? ọzọ okpu agha aerodynamic na-akwụ gị ụgwọ dị iche na okpu igwe ịnyịnya igwe ị nwere ike ikpokọta oge nchekwa na ụgwọ.
Yabụ jiri okpu kachasị nwayọ na okpu agha 150 watt kachasị ọsọ na ihe ọ bụla kachasị ọsọ, ka anyị kpọọ ya nke kachasị gị maka ya ọ nwere ike ịbụ okpu ụzọ nke emezighị emezi Ọ nwere ike ịbụ okpu nnwale ikpe mana anyị maara na okpu agha na-ejedebe nwayọ nwayọ na karịa N'ezie nke a ịgba ọsọ triathlon ebe nkezi igwe kwụ otu ebe bụ nkeji 40, ị ga-ntakịrị karịa a nkeji iji nwayọọ ma ọ bụrụ na ị na-eji a ọduọ bike okpu na ihe Olympic triathlon ebe nkezi igwe kwụ otu ebe bụ otu awa na 20 nkeji, will ga-abụ ihe dị ka nkeji abụọ 15 sekọnd jiri nwayọ karịa ọkara nke Ironman, nke na-ewe ihe dị ka awa atọ maka onye ọ bụla na-eme egwuregwu, ị ga-eji nwayọ nkeji ise jiri okpu igwe eji agba ịnyịnya, yana maka Ironman, ebe oge igwe kwụ otu ebe jiri awa isii nkeji 25, ị ga - eme ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ nkeji iri na otu ji nwayọ mgbe igwe okpu agha na - arịgo 210 watts mgbe ị mere otu Ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu siri ike maka ịgba ọsọ ọ bụ na oge ọzọ ga - adị obere karịa nkeji oge maka egwuregwu egwuregwu Olympic ọ ga - abụ nkeji abụọ 15 sekọnd sl Ower na igwe kwụ otu ebe na-agba ọsọ maka ọkara nwoke igwe ihe dị ka nkeji ise Ọ bụ na-agbanwe agbanwe na 150 watts na na Iron Man karịrị iri na ọkara nkeji iji nwayọọ, ya mere, anyị nwere ụfọdụ agbanwe agbanwe ebe a na ọ bụ ezie na anyị nwere ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti ihe dị ọsọ ọsọ, nke a ma ọ bụ nke jikọtara ya na nke ahụ, anyị maara na okpu igwe kwụ otu ebe n'onwe ya ga-abụ nwayọ nwayọ, yabụ gịnị? wercommendin triathlon bikefoundations ị nwere ike nweta akwụkwọ dijitalụ nke akwụkwọ ọdịyo ahụ ị nwere ike nweta nnomi siri ike si Amazon na triathlon triathlonbikefoundations.com ma ọ bụ na ọ bụrụ na ịchọghị, m na-ekwu na m ga-achọ ịzụta ya mana ọ bụrụ na ọ bụghị nke ahụ dịkwa mma m no n'ime akwukwo a bu na obu? Otu n'ime ihe kachasị mma maka ego gị ga - abụ ihe kwalitere, okpu agha aerodynamic, n'ihi na kama iji otu puku ma ọ bụ puku atọ ma ọ bụ puku anọ na wiil ụkwụ iji nweta otu uru anyị na - ahụ n'etiti nke a na nke ọ bụla n'ime ndị a , ị ka ga-azụrịrị okpu agha ka ị wee nọrọ naanị 50 ma ọ bụ karịa $ 150 karịa na otu n'ime okpu agha ndị a karịa okpu agha a na-eme mgbe niile, mana ị ga-ahụrịrị mmezi nke ọma, yabụ na m ga-akwado triathlonbikefoundations.com ị nwere mmasị n'ịhụ usoro nkwalite nkwalite anyị na-akwado ka anyị kwadoro maka ndị na-agba akwụkwọ ọhụụ, ma ọ bụrụ na ị debanyereghị aha na ụdị ụdị ahụ, pịa bọtịnụ 'Debanye aha' n'okpuru maka ya enwere ule ọzọ anyị gbara.
N'otu ụbọchị ahụ, ị ​​jiri igwe kwụ otu ebe tụnyere ịnyịnya ígwè ma hụ ma nwelite a ọ bara uru maka trainiacs n'ọdịnihu
Gịnị bụ lightest igwe kwụ otu ebe?
Ventral Lite bụ nke kachasị ọhụrụokpu aghaisonyere POCịgba ígwèezinụlọ, nanke kachasị mfeo meela ka. Na-elekwasị anya na ndị na-agba ịnyịnya na-ebute ibu na ventilashị karịa ihe niile, Ventral Lite nke enyere ọhụụ ka arụgoro nke ọma iji mezuo ezigbo ibu, nchekwa na arụmọrụ.Mar 5 2021
Kedu okpu agha nke kachasị ọsọ?
Mepụtara ha onwe ha ifufe ọwara, kpọrọ Win Ọwara, Pụrụ iche na-ekwu na nke a bụokpu okpuha nwaleela.Mar 17 2021
Okpu igwe igwe igwe dị oke ọnụ ọ bara uru?
Kedu ihe kpatara na okpu agha Kask enweghị MIPS?
B notGH notMIPSmaka Okuku Nchedo
Ha emeela ka etiti dị n’ime ha dịkwuo ike iji nyekwuo ike ọrụ na ịrụ ọrụ ka mma. Kwesịrị inwe mmetụta, ọ na-egbochi iheokpu aghasite n'itinye n'ọtụtụ iberibe.June 14. Ọkt 2018
nyc igwe kwụ otu ebe
Okpu okpu 1.5 kilogram dị arọ?
Dị ka ụkpụrụ ọhụrụ si dị, nke kachasịibu ibunkeokpu aghakwesịrị 1.2n'arọka o megide1.5 n'arọugbu a ọ bụla na emeputa nwere soro ndị a norms mandatorily.Jul 25. Ọkt 2018
Ọ bụ okpu TT ọ bara uru?
Ihe kwesịrị ekwesịoge ikpe okpu aghajiri ya tunyere okporo ụzọokpu aghabukwesịrịihe dị ka nkeji oge 40km, dị ka Michael Hutchinson si kwuo, ọtụtụ mbaoge ikpeonye mmeri na onye edemede nke Ọsọ: Mbido, Science na Luck Behind the Fastest Cyclists World. Maka ndị na-agba nwayọ nwayọ, uru ndị a nwere ike ibu ibu.
Ndi okpu agha aeroel na-ekpo ọkụ?
Dị ka a na-achị,aerookporo ụzọokpu aghadị ntakịrịọkụkarịa ọkọlọtọokpu agha. Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ na ana-ekpo ọkụisi mgbe na-agba ịnyịnya ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dị okena-ekpo ọkụụbọchị ị nwere ike ịchọrọ iduzi ya, mana ị ga-ahụ ọtụtụ n'imeaerookporo ụzọokpu aghasi n'ebe ahụ ụbọchị ndị a dị mma n'ọtụtụ ọnọdụ.Jenụwarị 28. 2020 g.
Kedu otu esi ahọrọ okpu igwe eji agba ịnyịnya?
Okpu igwe moto kacha mma kacha mma na - edozi nkasi obi, ikuku, ikuku na nchedo. Nke a bụ usoro nke kachasị mma, yana ntuziaka maka otu esi ahọrọ nke ziri ezi maka gị Enhụ na ị họrọ okpu igwe ịnyịnya igwe kachasị mma ga-agbanwe ahụmahụ ịnyịnya ígwè gị.
Kedu ihe na-eme okpu igwe kwụ n'okporo ụzọ Limar dị mma?
Limar akpụzila nnukwute nku carbon dịka okpu agha nke na-agbasapụ ihu n’elu shei ahụ, na-arụkwa ọrụ abụọ nke ịgbakwunye usoro na ike yana ihicha ikuku site na okpu agha ahụ.
Ego ole ka ekpu ekpu igwe bekee na-aha?
Dropframe Pro nwekwara igwe MIPS na akwa ụfụfụ na-adị njupụta abụọ. Enwere otutu okpu agha ebe a, nke na-egosi na ọkwa. Okpu agha a bụ gram 524 (nke buru ibu, nke anyị), ebe okpu agha na-adịkarị gram 340 ruo 380.